မွတ်စလင်မ်ဆိုတာ မိမိရဲ့ နှုတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လက်ကြောင့်ဖြစ်စေ အခြားမွတ်စလင်မ်တစ်ဦးအား ဒုက္ခမရောက်စေသူ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« HE U Hla Maung at the meeting with Deputy President
တရုပ္ ေတြဗုးံခြဲေနတာ ဆိုရင္ အစိုးရ က မသိပဲေနမလား? »
မနေ့ကတော့ စော်ကားစွတ်စွဲနေတာတွေကို အလုပ်ထဲမှာဖတ်ရင်း ဒေါသလည်းထွက်တယ် ရင်လည်းနာတယ်…
… မိုးရဲမှတော့ ဆောင်းရဲရမယ်ဆိုတာမျိုး ကိုယ်က ဒီမြန်မာမုစ်လင်မ်ကွန်မြူနတီအတွက် စိတ်ထဲကလှည့်မကြည့်ပဲ မနေနိုင်သရွေ့တော့ …
အရေလည်းထူပြီးပြီမို့ အသားမာလေးစတက်ဖို့ အားယူလိုက်ရဦးမယ်…
Tags: Backbiting, God, Islam, Muhammad, Muslim, Prophet, Qur'an, Satan
This entry was posted on October 19, 2013 at 1:12 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.